Abakhiqizi base China Palisade kanye nabaphakeli | I-Shoufan Metal
Uthango lwePalisade lungenye yochungechunge locingo. Isetshenziswa eNgilandi ekuqaleni. Manje uthango lwepalisade lusetshenziswa kabanzi ekhaya nakwamanye amazwe. Uthango olubiyelwe ngothango esikhundleni sodonga lwezitini noma uthango olusindayo lwenza indawo ohlala kuyo ihlanzeke. Isetshenziswa kabanzi ngenxa yokuphishekelwa kwemvelo kwabantu ...
Uthango olubiyelwe ngocingo
Uthango lwePalisade lungenye yochungechunge locingo. Isetshenziswa eNgilandi ekuqaleni. Manje uthango lwepalisade lusetshenziswa kabanzi ekhaya nakwamanye amazwe. Uthango olubiyelwe ngothango esikhundleni sodonga lwezitini noma uthango olusindayo lwenza indawo ohlala kuyo ihlanzeke. Isetshenziswa kabanzi ngenxa yokuphishekelwa kwemvelo yabantu, ukusakazwa kwenhlanzeko yomuntu nokufuna isitayela sangaphandle. Uthango lwePalisade ngesakhiwo esihle nezitayela ezahlukahlukene ziyathandwa futhi zisetshenziswa kabanzi.
Izinto zokwakha: Ishidi lensimbi elisezingeni eliphakeme, ishidi lensimbi elishisayo elishisayo, insimbi ebandayo, nensimbi eshisayo
Ukuphakama kocingo: 600-1200-1800mm
Okuthunyelwe: 50X50x4 mm
Ububanzi: 19 mm
Okuthunyelwe: 2400 High Fence -100 × 45
Okuthunyelwe: 3000 High Fence - 150
Ipuleti Lezinhlanzi: 40 × 8 140
I-Corner Fish Plate: Iphrofayili engu-40 × 8 215 ende
"W" Pale: Iphrofayili engu-71x21x3 W
Ukulungiswa Kwezitimela: Inhloko ye-M12x30 Cup Bolt neShear Nut
Ukulungiswa Okumnyama: I-M8x25 T Bolt neShear Nut noma - Insimbi Engagqwali Huck Pin Nekhola
Ukusekelwa kweMid Bay: I-M12x500 Threaded Rod nama-2x Nuts
Inqubo: Stamping, hot-bacwilisa, sishaye plastic, PVC anti-ukugqwala ukwelashwa
Isebenzisa: Zisetshenziswa njengothango oluvikelayo noma imihlobiso ezakhiweni, ezindaweni zokuhlala, embonini, kwezolimo, kuhulumeni wedolobha, ezikoleni, otshanini, emigwaqweni engadini, nasekuthumeleni.
Uthango lwe-Palisade lunezici zamandla aphezulu, ukuqina okuhle, ukuqina kwesakhiwo, i-anti-corrosion, nokubukeka okuhle, umbono obanzi, intengo ephansi, imibala ehlukahlukene, izitayela nokufaka kalula
Ukucaciswa okuvamile kocingo lwepalisade:
Iphaneli yocingo olwakhiwe ngocingo lwakhiwe ngamapulangwe wensimbi aphansi ayi-17 anohlobo lwe- “D” noma “W” phezulu.
Uma usebenzisa uthango lwepalisade, uhlobo olunobubanzi obujwayelekile obungu-2.75m lusetshenziswa kabanzi. Futhi lolu hlobo lokubiyela nge-palisade kulula ukufaka.
Ukuphakama kwephaneli yocingo 1m-6m
Ububanzi bephaneli yocingo 1m-3m
Ukuphakama Pale 0.5m-6m
Ububanzi obuphaphathekile Iphaphathekile 65-75mm, D iphaphathekile 65-70mm
Ubukhulu obuphaphathekile 1.5mm-3.0mm
Isitimela se-engela 40mm × 40mm, 50mm × 50mm, 63mm × 63mm
Ubukhulu besitimela se-engela 3mm-6mm
Okuthunyelwe kwe-RSJ 100mm × 55mm, 100mm × 68mm, 150mm × 75mm
Okuthunyelwe okuyisikwele 50mm × 50mm, 60mm × 60mm, 75mm × 75mm, 80mm × 80mm
Square post ukujiya 1.5mm-4mm
Ama-plate-fish aqondile noma ama-post clamp 30mm × 150mm × 7mm, 40mm × 180mm × 7mm
Ama-Bolts namantongomane I-M8 × No. 34 yokulungiswa okuphaphathekile, I-M12 × No.4 yokulungisa ujantshi
Langaphambilini Okuthunyelwe kocingo
Olandelayo: Ucingo lwesikhashana
4x4 ashiselwe Wire Mesh Fence
Lashukumisa Fence Wire Ucingo
Ashiselwe Wire Fence Iphaneli
Ashiselwe Wire Mesh Fence
Ashiselwe Wire Mesh Ukuze Fence
Ukubiya ngocingo kabili